Fahatsorana an-tanàn-dehibe, ny hatsaran-tarehy ny loko mainty, fotsy ary ny lokon'ny volondavenona - DAS Design
Home / Interior design / Fahatsorana an-tanàn-dehibe, ny hatsaran-tarehy ny loko mainty, fotsy ary ny lokon'ny volondavenona - DAS Design
2020 / 11 / 29 FisokajianaInterior design 7561 0
Mba hitazomana ny habaka amin'ny endrika kanto mirindra sy milamina, ny fanaka dia manary ny volon-doko sarotra ary mampiasa mainty, fotsy sy volondavenona ho toy ny fotony, miaraka amin'ny mena toy ny loko mitsambikina, manome ny habaka manontolo hisongadina amin'ny endrika maoderina sy lamaody .
Amin'ny fanatanterahana ny velaran-tany, ny mena dia nanjary ny protagonista hita maso, izay nampidirina tamina antonta-pitaovana sy endrika isan-karazany, miaraka amina toetra matanjaka sy tsipika mainty sy fotsy izay mifanehitra matetika amin'ny toerana tsirairay hitazonana ny hatsarana mampiray sary, nefa koa manolotra tetika mirindra sy mitombina mankany. Ny seza fisakafoanana dia tsy manam-paharoa sy manintona ny maso, ny fahatsapana endrika fonosana voninkazo sy mpihazona labozia dia manatsara ny toetran'ny efitrano fisakafoana, ary ny fanantonana miendrika endrika dia mameno ny asan'ny kabinetran'ny divay ary mandravaka ny rindrina.
Ny loko mena midorehitra dia fanoharana amin'ny filan'ny nofo sy ny fiainana, toy ny masoandro miposaka izay manindrona ny zavona, miteraka fihenjanana mafy rehefa mifanohitra amin'ny mainty sy fotsy. Ny seza felana mena dia manintona ny mason'ny mpitsidika voalohany, ary ilay sary hosodoko boribory lehibe dia manaparitaka ny monotony amin'ny rindrina miloko matevina, raha mitsambikina kosa ireo singa boribory telo-habe, ary miforona fifandraisana mahaliana amin'ny karipetra sy ondana. tsy nahy nanambara ny tsiro endrika tantaram-pitiavana sy manaitra.
Nampiasainay ireo singa boribory tamin'ny karazana sary hosodoko, kojakoja ary fanaka rehetra mba hamoronana toerana iray mitambatra sy manaitra.
Ny toetra malaza indrindra amin'ny andiana lalao Nintendo dia tsy iza fa i Mario. Naka singa avy amin'ny lalao Mario izahay ary nampiditra azy ireo tamin'ny sary hosodoko, firavaka ary ondana fandriana mba hamoronana rivo-piainana mahafinaritra ary hitondra rivo-piainana mampiadana sy mahafinaritra ho an'ireo mpitsidika.
△Drafitra fivarotana rihana
Ny habakabaka iray manontolo dia anjakan'ny tonon-tany, miaraka amin'ny fampiasana am-pahendrena ny lamba volondavenona avo lenta, hoditra matevina ary marbra, miaraka amina loko rameva maivana sy volamena, mampifangaro endrika, famolavolana ary fampiononana. Izy io dia miteraka fiainana avo lenta sy mihoapampana.
Ny faritry ny efitrano fandraisam-bahiny dia voahidy amin'ny endrika mamela malalaka akaiky nefa tsy tery. Ny felam-boninkazo vita amin'ny krystaly, ny felam-boninkazo mamiratra, ary ny fametrahana refy telo dia mametraka ny feo ho an'ny habaka miaraka amin'ny firafitra maoderina.
Ny antsipiriany rehetra dia noforonina sy nohosorana mba handinihana ny fahazaran'ny tena sy ny fomba fiaina tadiaviny hotratrarina. Ny sary, ny firavaka mifandraika amin'ny sary, ary ny boky dia mandray anjara amin'ny rivotra mangina ao an-toerana. Kavina kariera isan-karazany no ampiasaina amin'ny sary hosodoko, firavaka ary lambam-pandriana malefaka mba hamoronana fiteny mahafinaritra sy miloko amin'ny habakabaka.
Ny kojakoja marefo sy chandelier volamena dia mifameno, miaraka amina fihenan-tsakafo kely eo amin'ny felam-boninkazo latabatra, toy ny volon'ny mafana amin'ny fararano.
Raha tsy maintsy noravahanao tamin'ny inona ilay "tigra" anatiny, dia volamena manjelanjelatra, kristaly sarobidy ary zava-kanton'ny kanto kanto io.
Ny fampiasana ny hoditra lasely dia manatsara ny firafitry ny fanaka, ny fitaovana manjelanjelatra dia mitondra fahatsapana fihetsehana amin'ny habakabaka, ary ny sosona mavo isan-karazany dia mampifanaraka ny habaka sady mitondra hafanana ho an'ireo mpitsidika. Ny fahalemen'ny firafitry ny fandriana sy ny volonondry vita amin'ny volon'ondry mahery, ary ny fahadiovana sy ny hakanton'ireo zavatra isan-karazany dia mahatonga ny efitrano fandriana hifandanja tsara amin'ny mari-pana sy ny fomba.
Ny misterin'ny habakabaka dia toerana iray tadiavin'ny ankizy rehetra. Ny fanaka mahaliana miaraka amin'ny jiro, sary hosodoko ary haingo misy lohahevitra dia nametraka ny feo ho an'ny habaka. Planeta telo-habe isan-karazany, mpanamory sambondanitra ary singa mifandraika amin'izany hampanan-karena ny tontolon'ny lohahevitra, hahatratrarana ny fahatsapana fa eny amin'ny habakabaka, manome ny olona herim-po hitrandrahana ny tsy fantatra.
△Plan du jour
Anaran'ny tetikasa - Jinjia Longhu - Unitsim-maodely ao amin'ny renirano Li
Adiresin'ny tetikasa - Zhaoqing, Sina
Vondron'ny tompona - Vondrona Iraisam-pirenena & Longhu an'ny Jinjia
Ekipa tompony: Wang Yang, Lan Xinchun, Li Zhe, Zhang Wenjie
Ekipa mpamorona - Cui Duan, Luo Hui, Liu Yaolin, Lin Yuxiang, Le Yunxing, Fu Zhiheng, Fan Gao, Wu Yunxia, ​​Tang Jiwang, Zeng Di, Hong Dengqing, Lin Manqing
Famolavolana anatiny - Shenzhen Dasen Design Co.
Volavola haingon-trano malefaka | Shenzhen Mukin Design Engineering Co.
Daty famitana: Aogositra 2020
Faritra tetik'asa - 65㎡ / 95㎡
Photographer an'ny tetikasa - Dee Min Cho
Previous :: Grey, Fa maninona no mandroso? Next: Fomba fanaovana hazo, Ahoana ny fomba hamoronana hatsarana gadona?
2020 / 12 / 12 6080
2020 / 12 / 05 6435
2020 / 11 / 29 6186
2020 / 11 / 29 6519
2020 / 11 / 29 6744